आफूमा आउदै गरेको दुःख कष्टलाई पन्छाउन चाहानुहुन्छ भने जप गर्नुहोस यस्ता मन्त्रहरु ! « Online Tv Nepal
आफूमा आउदै गरेको दुःख कष्टलाई पन्छाउन चाहानुहुन्छ भने जप गर्नुहोस यस्ता मन्त्रहरु !
Published : 30 March, 2020 8:05 pm
ज्योतिष शास्त्रअनुसार पूजाको समय केहि गल्ती भएमा यस मन्त्रको जप गर्नु पर्दछ जसले भुललाई क्षेमा गरी शुभ फल प्रदान गर्दछ। यस्तो छ मन्त्र… अपराधसहस्त्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं मया। दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर।। गतं पापं गतं दु:खं गतं दारिद्रय मेव च। आगता: सुख-संपत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनात्।।
अर्थ – हे परमेश्वर। मद्वारा रात-दिन हजारौ अपराध भई नै राख्छ। यो मेरो दास हो। यस्तो सम्झेर मेरो ती अपराधलाई कृपापुर्वक क्षमा गर्नुहोस। तपाईको दर्शनबाट मेरो पाप र दुख नाश होस, दरिद्रता हटोस्। सुख सम्पत्ति प्राप्त होस्। यस्तो बरदान दिनुहोस।
यी कुराको ख्याल राख्नुहोस…
प्रत्येक पूजाको अन्तिममा यस मन्त्रको जप गर्नुहोस जसले भगवानको कृपा रहिरहन्छ। यदि देवीको गर्ने हो भने परमेश्वरको स्थानमा परमेश्वरी बोल्नुहोस। मंत्र जप वा पाठ गरेपछि यस मन्त्र जप्न सक्नुहुनेछ।
यी बार गर्नुहोस् नयाँ कामको सुरुवात ! कमाउनु हुनेछ सोचेभन्दा बढी धन !
व्यक्तिको जीवनमा जन्म बार र राशी ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ । हरेक व्यक्तिको जन्म बार हेरेर नै व्यक्तिको कुण्डली निर्माण गर्ने गरिन्छ । जन्मेको बार र राशीले नै ब्यक्तिको भविष्य बारे बताउने गर्छन् ।
ज्योतिष शास्त्र अनुसार जो कसैले व्यापार व्यवसाय र नोकरी गर्नको लागि पनि आफु जन्मेको बारमा कुन दिन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ । त्यसकारण आज हामी तपाईलाई सात बार मध्ये कुन दिन के कामको सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने बारे जानकारी दिन गइरहेका छौँ ।
१.आईतबार : आइतबारको दिन गीत ,बाध्य, राज्याभिषेक गर्ने, राजसेवा, गाइगोरु, किनबेच गर्ने, हवन गर्ने मन्त्र उपदेश लिने, औषधी निर्माण गर्ने, शास्त्र , सुन, तामा, उनी, बस्त्र जस्ता सामाग्रीको किनबेच गर्ने, रातोवस्तुको कारोबार गर्ने जस्ता कार्य गर्नु धेरै शुभ रहनेछ ।
२.सोमबार : सोमबारको दिनलाई भगवान शिवको प्रिय दिनको रुपमा लिने गरिन्छ । सोमबारको दिन गाई, भैसी, घोडा, फुल, घाँस, वृक्ष्य, मोती, चाँदी, आदिको किनबेच गर्नु महिलाहरुको संगत गर्नु निकै राम्रो मानिन्छ ।
३.मंगलबार: मंगलबारको दिन भगवान गणेशको पूजा आरधना गर्ने दिन । यो दिन गणेश भगवानका पूजाआज गरे जस्तो सुकै कामको सुरुवात गरेपनि सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
बुधबार : यो दिनलाई पुण्य आर्जन गर्ने दिनको रुपमा लिइन्छ । बुधबारको दिन वस्तु कला, चित्रकला र अध्यायनमा सोचेभन्दा धेरै सफलता मिल्नेछ ।
५.बिहिबार : यो दिन धार्मीका कार्य गर्नु राम्रो मानिन्छ । यो दिन मन्दिर निर्माण, मन्त्र जप, नवग्रह प्रजा गर्दा तपाईको कार्य निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुन्छ ।
६.शुक्रबार : यस दिन गायण, मणी, रत्न, हिरा, सुगन्ध, बस्त्र, उत्साह, अलंकार, बाणिज्य, व्यापार, गाई वस्तु मिनबेच गर्नु, द्रव्य भण्डारण गर्नु धन सञ्चय गर्नु, कृषि कार्य सुरुवात गर्नु शुभ मानिन्छ ।
७.शनिबार : शनिबार कुनै पनि नयाँ कार्य सुरु गर्दा शनि देवको ठूलो प्रभाव पर्ने धार्मिक शास्त्रमा उल्लेख गरएको छ । झुटो बोल्नु , ठगि गर्नु , कपट गर्नु , गृह प्रवेश, स्थिर कार्य , नोकरी गर्नु , कलकारखानाको उद्यघाटन, फलाम , तरवार आदिको कार्य गर्नु निकै शुभ मानिन्छ ।